नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक | eAdarsha.com
नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक
१. नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी खतर्नाक स्थितिमा पुगेको छ । त्यो पार्टी फुट्ला–फुट्ला जस्तो भएको छ । तैपनि केही नेताहरुले त्यो पार्टी फुट्दैन भन्दैछन् । केही नेताहरुले अझ पनि त्यो पार्टी इस्पातले बनेकोले त्यो फुट्दैन भनेर आस्वस्त पार्न खोज्दैछन् । नेताहरुले मुखले त्यसो भनेता पनि अनुहार निन्याउरो छ ।
२. नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी सत्तारुढ पार्टी हो । सत्तारुढ पार्टी फुट्दा त्यसको असर सरकारमा पर्नु स्वभाविक हो । सरकारमा त्यसको असर के कस्तो पर्दैछ, त्यो अहिले भन्न सकिदैन । फेरि त्यसमा पनि यो सरकार झण्डै दुई तिहाई बहुमतको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस कमजोर अवस्थामा छ ।
३. नेकपाका नेताहरुले आ–आफ्नो समूहको भेला गराएर फुटेपछि के कसरी जाने, त्यसको गोप्य मन्त्रणा सुरु गरेका छन् । पार्टी टुक्रेको आरोप आफू माथि आउला भनेर उनीहरु सतर्क र सजग छन् । उनीहरु दोष अरुमाथि थोपर्न प्रयासमा छन् ।
४. केही नेताहरुले अझ पनि मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कसरी मिलाएर जान सकिएला भनी आफनो सक्रियता बढाइ रहेका छन् । तर केही नेताहरु भने मिलेर जाने अवस्था छैन भन्दै आफ्नो समुहलाई चनाखो भएर रहन निर्देशन समेत दिएका छन् । त्यसो गर्नेहरुले मिलेर गएपनि काम लाग्दैन भनी निराशता व्यक्त गर्दैछन् ।
५. लड्दा खेरि जहाँ पनि एक पछि अर्काे पटक स्थिति जटिल बन्दछ । त्यस्तो स्थितिले मिलाउन खोज्नेहरुलाई अरु अप्ठ्यारो पर्दछ । यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ । स्थिति जटिल त थियो नै त्यसमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपसमा लिखित रुपमा आरोप प्रत्यारोप गर्दा स्थिति अरु पेचिलो भएको छ ।
६. उनीहरु एउटै पार्टी नेता भन्नै नसुहाउने गरी आक्रमण र प्रत्याक्रमण गरिरहेका छन् । आक्रमण र प्रत्याक्रमण पत्रका शब्द हेर्दा उनीहरु कहिल्यै नमिल्ने स्थितिमा पुगेका जस्ता देखिन्छन् । हुन त यो उनीहरुको जन्मजात गुण हो । कुनै वेला त्यही पार्टीका नेताहरुले टुडिखेलको खुल्ला मञ्चमा वामदेव गौतमलाई महाभारत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।
७. देशमा कोरोनाको महामारी छ । देशको आर्थिक स्थिति खस्कदो आवस्थामा पुगेको छ । यस्तो वेलामा सत्तारुढ पार्टीको नेताहरु कुकर विरालो झैं झगडा गरिरहेका छन् । यो कदापी उचित होइन । यो विवेकसम्मत छैन । यसले देशलाई अरु विगार्दै छ । यो गम्भीर विषय छ । नेताहरु त फुट्छन्, फेरी भोलि मिल्छन् । तर देशलाई पुगेको नोक्सानीको जिम्मेवार को हुने ? यो प्रश्नको उत्तर झगडालु नेताहरुले दिनु पर्दछ । उनीहरुले ठण्ठा दिमागले सोचेर सम्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।